49 kalandar cusub oo wax soo saar leh oo lagu dhiirrigelinayo | Abuurista khadka tooska ah
Sannad cusub ayaa bilaabmaya, iyo runtu waxay tahay roobka jadwalka taariikhda ee had iyo jeer yimaada inuu ku dhow yahay inuu go'an yahay, laakiin inta badan waxaan soo bandhigi karnaa hal shay: badanaa kama badna sawir qurxoon oo fudud iyo taariikhaha.
Kuwa hadhay boodka ka dib way kala duwan yihiin, asal ahaan, hal-abuurnimo, xarrago, casri ah. Wax kasta oo aqlabiyadda badan aysan haysan, waxay isugu uruureen meel yar.
iyada oo loo marayo Oscar Diaz
Jadwalkaan cusub wuxuu kuu ogolaanayaa khadadka dhalada inuu ku faafo maalmaha bisha oo dhan.
iyada oo loo marayo Alone-zino
Kalandarka Wareegga 2010
Naqshadeynta jadwalka gaarka ah ee qaab wareegsan.
iyada oo loo marayo Yanko Design
Ku soo dhowow maalin kasta oo cusub adoo xoqaya si aad u muujiso taariikhda!
Kalandarka Hal-abuurka 2008
iyada oo loo marayo Fenyu
Kalandarka xiisaha leh ee bil kasta ay tahay goob taraafiko kala duwan sida uu u arko gaari xamuul ah.
iyada oo loo marayo Rekord
Midab kastaa wuxuu u dhigmaa maalmo kala duwan ee usbuuca.
iyada oo loo marayo Tim Pokrichuk
Kalandar gaar ah oo leh naqshad u eg webka.
iyada oo loo marayo Carlos Coelho
Weli jadwal kale oo wareega ah oo leh midabbo loo qoondeeyey maalin kasta shaqsi kasta ee toddobaadki ah
Jadwalka Ka Sameynta Kulamada
iyada oo loo marayo Yurko Gutsulyak
Taariikh kasta waxaa laga sameeyaa isboorti.
Kalandarka Xumbada 2010
iyada oo loo marayo Kid Perpetual
Ku raaxayso riixista xumbada xumbada? Waa inaad tan heshaa.
Kalandarka Dhiirrigelinta Barometer-ka ah
iyada oo loo marayo Lindsey_muir
Sidaad u sheegi karto, waa inaad u weecataa goobo si aad u matasho bisha saxda ah, taariikhda, maalinta iyo xitaa cimilada.
Maalin Apple ah
iyada oo loo marayo David Weik
Tufaaxu maalintii dhakhtarka wuu fogeeyaa. Ka fiiq calaamadda tufaax kasta oo aad cunayso ku dheji taariikhda.
Sanad Wacan Oo Ka Soo Baxay Milo Farxad Leh
iyada oo loo marayo Jonathan Davies
Nooc midabkiisu dhan yahay bilaha.
iyada oo loo marayo Jennifer Daniel
iyada oo loo marayo Guilherme Pontes
Kalandarka adeegsada nooca 'Helvetica typeface' iyo noocyo kala duwan oo sasabasho ah.
Moma Jadwalka Jadwalka
iyada oo loo marayo Gideon Dagan Design
Qaab dhismeedka 3D kalandarka.
Kalandarka la cuni karo
iyada oo loo marayo Dmitry Kutlayev
Chocoholics, ku xaddid qaadashada shukulaatada jadwalkaan la cuni karo.
Shaybaarada Dr Reddy: Jadwalka
iyada oo loo marayo Sudler & Hennessey
Farriinta kalandarkaan: Sigaar cabiddu waxay gaabinaysaa cimrigaaga.
«Dorogaya» Kalandarka Magnetic
iyada oo loo marayo Serhiy Chebotaryov
Kalandarka magnetka ee aad ku ridi karto qaboojiyahaaga.
iyada oo loo marayo Dave Gray
Hal geesoolayaal laba iyo toban geesle ah sida kaalandarkaaga sanadka.
iyada oo loo marayo Calendar-Game
Khad kasta ku xir taariikhda cusub maalin kasta. Carruurtu way jeclaan doonaan tan.
Kalandarka Lens Camera
iyada oo loo marayo Sharad Kaksar
Muraayadaha muraayadaha muraayadaha ayaa u waxyooday sawir qaadayaasha xiisaha badan.
Kalandarka Wax Walba Wuu I Sheegayaa
iyada oo loo marayo Maksim Biriukov
Kalandarkaan ayaa kuu sheegaya sanadka, bisha, taariikhda, maalinta iyo xitaa waqtiga.
Kalandarka Napkins 2009
iyada oo loo marayo Stas Aki
Maro jilicsan iyo jadwalka isku dhafan.
iyada oo loo marayo Niels Kjeldsen Design
Baloogyo caag ah oo leh timir iyo bilo.
iyada oo loo marayo Qaaim Goodwin
Qaab-dhismeedkan alwaaxa ayaa ah beddelaad hal-abuur ah oo ka soo baxa jadwalka-qaabka caadiga ah ee warqadaha.
Dib-u-warshadaynta Kalandarka Bin Advent
adoo adeegsanaya Kelanew
Kalandarka gacanta lagu farsameeyay iyadoo la adeegsanayo walxaha dib loo rogay.
loo maro Pulse247
Jadwalka wareegga oo leh midabbo kala duwan.
iyada oo loo marayo Takeshi Nishioka
Shaah ka cab kalandarkaan.
Jadwalka Jadwalka Tear-Off
iyada oo loo marayo Parachute
Hubi noocyada noocyada kala duwan maalin kasta sanadka.
Jadwalka Tickler ee Habka Soodhawaynta
iyada oo loo marayo Judyofthewoods
Baadho ballamahaaga iyo liistada wax-qabadka taariikhda kasta.
iyada oo loo marayo Voskhod
Weli jadwal kale oo xoq ah, laakiin markan waxay muujinaysaa sawirro qosol badan, kaftan, xujooyin, iwm oo ka hooseeya taariikh kasta.
iyada oo loo marayo Slanted
Arag cinwaan cusub maalin kasta.
Laba iyo tobanka Calendar
iyada oo loo marayo Thomas Williams
Qaab dhismeedka aan caadiga ahayn ee jadwalka. Taariikhahaas hadhku waa dhammaadka toddobaadyada.
iyada oo loo marayo Quintohache
Kalandarka 3D oo ka sameysan leben u eg Lego.
Kalandarka Google Lego
iyada oo loo marayo Keso
Kalandarka kale ee lego-dhiirrigeliyey ee Google.
iyada oo loo marayo Elma + Alt + Shift
Jadwal qurxoon oo muujinaya taariikh kasta oo lala leeyahay dadka dhismaha ku jira.
Nie Calendar Kalandarka
iyada oo loo marayo Iheartlinen
Kalandar aad adigu dareentid oo aad ku qanacsan tahay qaabka linenka.
iyada oo loo marayo Digichick
Kalandarka gacanta lagu sawiro oo leh sawir qoys.
iyada oo loo marayo Etsy
Bandhig kalandarka kaararka bisha, taariikhda iyo maalinta.
Kalandarrada Waraaqaha Pink ee 2009
Kalandar qurux badan oo leh farriimo iyo sawirro qurux badan.
iyada oo loo marayo Johann Volkmer
Fur bil kasta oo cusub oo aad ku nuuxnuuxsato farsamada wanaagsan ee pop-ups.
Kalandarka Wareega 70s
iyada oo loo marayo Presentandcrect
Wareeg kastaa si aad u muujiso taariikhda iyo bilaha saxda ah.
iyada oo loo marayo Kalandarka Aadanaha
Isticmaal madadaalo leh oo sawir gacmeedyo sawir ah ah oo loogu talagalay dadka afar gees kasta oo kalandarka ah.
Jadwalka Tirinta-Guriga ee Finn & Rockwell
iyada oo loo marayo DezinHQ
Naqshad jadwal duug ah.
Jadwalka Khariidadda 2008 & Diiwaanada Lart C. Berliner
iyada oo loo marayo Daabacaadda Little Otsu
Bil kasta waxaa loo sawiraa qaab si ay ugu ekaato gobolo shaqsi khariidad ah.
iyada oo loo marayo Kate
Jadwalka kale ee gacanta lagu sawiray iyadoo la isticmaalayo kaliya khad madow.
iyada oo loo marayo Unicorn Graphics
Jadwalka caadiga ah ee qarniga 20aad miiska naqshadeynta oo lagu dhiirrigeliyay calaamadaha tareenka.
Sannadka oo dhan ku arag jadwalka dhaadheer ee dhaadheer ee u eg-dhismeedka.
Ku saabsan qoraaga - Michael poh waa blogger madaxbanaan oo ka yimid Singapore. Hadda wuxuu shahaadada koowaad ka qaataa Jaamacadda Qaranka ee Singapore isagoo ku takhasusay cilmu-nafsiga. Isagu waa fiidiyoow xamaasadeysan oo fiidiyoow wuxuuna xiiseeyaa farshaxanka CG.
Akhri wax dheeraad ah: http://www.hongkiat.com/blog/simple-numbers-complicated-dates-49-innovative-calendars/#ixzz0byZcVOSB
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Dhiirrigelinta » 49 kaalandarro hal-abuur ah oo lagu dhiirrigelinayo